Nwoke isii - --mụ nwoke --hụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Isi isii nkezi 2.7 / 5 si 3
NA / A, o nwere ihe nlere 12.8K
Lovemụ nwoke Lovehụnanya, Drama, Webtoons, Yaoi
Obi ebere, charismatic na mystic Taeo na naanị ya na ihe omimi Ho, ha abụọ na-akpa na nzuzo. Ma na Taeo gbagwojuru anya site n'omume Ho na-amaghi na otu o si dị iche na nke ọ maara. N'etiti mmadụ abụọ nọ n'ihe ize ndụ nke ikewa. Kedụ ka obi abụọ a ga - esi bido dị egwu?
Bịa Laghachi n'ụlọ